Inaad ka soo qaadid heerkulka 38 ee qaangaarka?
Marka walxaha faafa jirka ku galaan, haddii ay yihiin fungi, fayrasyada ama bakteeriya, hyperthermia badanaa waxay dhacdaa. Sidaa daraadeed, booqdayaasha daaweeyayaasha ayaa inta badan xiiseynaya waxa la garaaco heerkulka 38 ee qof weyn, sida ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah si aad ugu noqotid qiyaasta caadiga ah ee nolosha. Si kastaba ha noqotee, ra'yiga takhasuska xaaladdan kuma habboon rabitaanka bukaanka, inta badanna guud ahaan laguma talin in lagula dagaallamo hyperthermia heerkan.
Miyuu suurtagal ah oo lagama maarmaan u ah inuu hoos u dhigo heerkulka 38 ee qof weyn?
Waxay u egtahay in xaaladda xaaladdu ay tahay calaamad cad oo ku saabsan cudurka iyo baahida daaweynta astaamaha. Laakiin qaababka hyperthermia waa mid aad u adag.
Cuncunka haweenka ayaa keena falcelin deg-deg ah oo ka yimaadda habka difaaca jirka. Waxay si firfircoon u bilowday inay horumariso interferon - walax gaar ah oo loogu talagalay in lagu hortago unugyada shisheeye, bakteeriyada iyo fungi. Intaa waxaa dheer, kororka heerkulka gudaha waa xaalad aan fiicneyn oo loogu talagalay waxqabadka muhiimka ah ee ku-dhalin-la'aanta jeermiska, taniyo inta lagu jiro hyperthermia, badankoodu way dhintaan.
Sababaha la soo bandhigay, daaweeyayaasha guud ahaan kuma talinayaan in ay hoos u dhigaan qandho yar oo ah 38-38.5 digrii. Halkii caadiga ah ee heerkulka jidhka, waxaa fiican in la siiyo nidaamka difaaca awoodda uu kula tacaali karo infekshanka keligiis. Sidoo kale, waa inaadan isku daboolin dhowr bustayaal si dhidid ah. Dhaqdhaqaaqa, liddi ku ah, wuxuu u baahan yahay hawo qabow cusub oo kuleylka kulaylka dibadda iyo qaboojinta raaxo leh.
Waxa kaliya ee dhabta ah ee loo baahan yahay in la sameeyo waa ka hortagga fuuqbaxa iyo kulaylka. Si aad tan u samayso, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho mugga kor u kaca dareeraha diirran: biyaha, shaaha, jajabyada dhirta iyo fedraalka, cabitaanka ama cabitaanka miro.
Sidee ayaad u garaaci kartaa heerkulka 38 ee qof weyn?
Haddii hyperthermia la socoto calaamado caafimaad oo aad u xun oo ah qaabka madax-xannuun ama lallabo, hoos u dhac yar oo qandho ayaa la oggol yahay.
Waxa ugu horreeya ee bukaanku isticmaalo markaad dooranaysid, halkii aad ka qaadi lahayd heerkulka 38 ee qof weyn waa kiniin. Daawooyinka ugu ammaansan uguna fiican ee ku jira foomkan qiyaasta:
Waxaa muhiim ah in aan ka badneyn xaddiga la soo sheegay iyo, haddii ay suurtagal tahay, iska ilaali isticmaalka antipyretics isla markiiba ka dib marka la wanaajiyo xaalada guud.
Sidee loo dejiyaa heerkulka 38 ilaa 38 iyo 5 qof weyn oo aan daawo lahayn?
Waxaa sidoo kale jira habab sahlan oo lagu yareeyo heerka darnaanshaha hyperthermia waxayna yareyneysaa heerkulka jirka. Hababka soo socdaa waxay ku habboon yihiin tan:
maqaarka ku tirtira shukumada qoyan biyo;
isticmaalka qadar badan oo ah dareer kulul;
qaboojis qabow on wajiga iyo qoorta;
qaadashada xalka hypertonic;
Qaboojinta dabiiciga ah (qubays qabow, hawo cusub).
Waxa kale oo suurtagal ah in la isticmaalo daawooyinka loo yaqaan "phyto-drugs" oo leh saameyn antipyretic ah.
caleemaha qalalan iyo cawska raspberries - 2 tsp.
biyaha 180-200 ml.
Diyaarinta iyo isticmaalka
Xardho alaabta ceeriin ee khudradda ah, ku duub biyo karkaraya, sida shaaha. Cab cabitaan, ku dar sonkorta, macaanka ama malabku inay dhadhamaan.
ubax lime - 1 qaado shaah;
biyaha - 220 ml.
Isku qas geedo yaryar oo ku dhufo biyo karkaraya, sug 15 daqiiqo, godo. Cab dhawr jeer maalintii maaliyad aan qaan-gaar ahayn, waad macaan kartaa.
berry ah raspberry ama sabdo - 1 tbsp. qaaddo;
biyaha - 1 dhalo.
Ku dhaq moyaha, ku xoqin qaaddo ama xargo, ku shub biyo kulul. Kadib qaboojinta heerkulka 50-60 digrii malab. Cab cabitaan sida shaah.
Sidee loo daweeyaa tracheitis?
Kansarka mindhicirka - calaamadaha
Xayawaanka biyaha ku jira ee Maqaarka
Maqaarka caafimaadka leh
Colic Biliari waa xaalad degdeg ah
Sidee loola tacaalaa antibiyootikada?
Hemangioma oo lafdhabarta - daaweynta
Diprospan - Analogs
Nabaro ku yaala suxulka
Cudurka 'lymphatic leukemia'
Sidee looga takhalusaa qadhaadh afkiisa?
Samuel L. Jackson oo kursi curyaan ah ayaa u muuqday waddada
Orchids ubaxa guriga
Qaadashada calaamadaha cagaaran
Jasiirad muuqaal ah
In Matxafka Madame Tussaud, tirooyinka Angelina Jolie iyo Brad Pitt
Salad leh tuun iyo bariis
Kansarka Sigmoid - Calaamadaha ugu horreeya
Boots Hunter - sida loo kala saaro kabaha rasmiga ee asalka ah Hunter ka soo liisanka?
Xasillooni waa dareen xun
Noocyada tufaaxa waa ikhtiyaarada ugu fiican ee u qalma in aad dooratid beertaada
Pearl Pearl - 8 fikradaha asalka ah ee lagu kariyo saxan fudud
Goorta aad uur leedahay ka dib markaad uur leedahay?
Eggplants ee Turkish - cuntada cajiib ah oo cajiib ah ee suxuunta oriental
Sida loo sameeyo qolka balakoonka ee gacmahaaga?
Salmon ee suugo creamy ah
Caanaha eeyga ee husky
Kabaha dharka dumarka
Kursiga xundhurta ee ku wareegsan qoorta ilmaha